Arag..Mushaarka Khiyaaligaa ee Dhaqaatiirta Ajaanibta Muqdisho | Xaqiiqonews
Arag..Mushaarka Khiyaaligaa ee Dhaqaatiirta Ajaanibta Muqdisho
Shirkadaha caafimaadka Muqdisho ayaa dhaqaatiirta ajaanibta u isticmaala “shabaq” ayaa ku soo dabaan bukaanada, arinkaasi oo hadda isku badalay il dhaqaale oo bil walbo laga sameeyo lacago kumanaan doolar ah.
Tusaale, hadii qof ka mid dadkii ku dhintay isbitaalada Mqudisho la weydiin lahaa waa maxay sababta aad u dhimatay? dabcan waxa uu ku jawaabi lahaa “lacag darteed”, maxaa yeelay hadii aad leedahay jir caddaan ah waxa aad noqon kartaa dhaqtar ka howgala Xamar, si aad u disho dad bukaan ah lacag darteed.
Waxa uu ahaa howlgab ka hor inta uusan imaan Muqdisho, haddase waxa uu noqday “mushaari” faa’ido ahaan u soo xareeya kumanaan doolar bilwalba,waxa uuna mushaar ahaan u helaa bil walbo lacag dhan 12 kun oo doolarka Mareykanka.
Isaga oo kaliya ma ahan, waxaa jira boqolaal kale, kuwaasi oo subax u walbo u kallaha xarumaha Caafimaadka Muqdisho, waxa ayna ka siman yihiin dhamaantood magaca ah “dhaqaatiirta ajaanibta Muqdisho.
Waxaa jira arimo badan oo kadis kuga noqonaya marka aad ogaato waxyaabaha ka socda Xamar, xarumaha caafimaadka Muqdisho waxa ay qaarkood bixinayaan 16 kun oo doolar mushaar ahaan bil walbo, waxaa lagu siinaya hoy aad dagto, waxa aadna leedahay maalmo fasax ah bil walbo.
Ma xuma in Isbitaalada ay sameeyaan lacag, hase ahaate waa in tixgelin la siiyaa bukaanka, taasna waa mid ka mid ah caqabadaha hortaagan isbitaalada muqdisho oo qaarkood hadda isku badalay beer weyn oo lacag gurasho ah kaliya,